Aha! Jokes, Satire | Myanmar Gazette News Media Forum Network - Page 20
Aha! Jokes, Satire	43
ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ ရှိတယ်…။
လွမ်းတော်မူလို့ စာကိုစီတယ် – ၂ သရက်သီးသနပ် .. အဲ့လေ .. ဖက်တီးကတ်
ဂီ ကို လွမ်းလို့ ရေးတဲ့ စာ
Page 20 of 191«<...10...1819202122...304050...>»